Maajo | 2010 | WEEJIDOW
Archive for Maajo, 2010
Wafdigii Madaxweynaha Soomaaliya oo maanta gaarey magaalada Nice ee dalka Fransiiska
Maajo 31, 2010
Wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo Madaxweynaha Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa galabta gaaray magaalada Nice ee dalka Faransiiska iyaga oo ka qayb galaya shirka berri magaalada Nice uga furmaya madaxda Africa iyo Madaxweynaha iyo masuuliyiinta dalka Faransiiska.
Madaxweynaha Soomaaliya waxaa safarka ku weheliya, masuuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka Arrimaha Dibadda, Wasiirka Hiddaha iyo Tacliinta Sare, Wasiirka Dekadaha iyo Gaadiidka Badda, laba Ra’iisul Wasaare hore ee Soomaaliya, Xildhibaanno, General ka tirsan ciidanka Booliska Soomaaliyeed iyo saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Soomalaiya.
Wafdiga waxaana magaalada Nice uga soo horreeyey soona dhaweeyey Danjire Nuur Xasan Xuseen safiirka Soomaaliya u fadhiya Midowga Yurub iyo Talyaaniga iyo Safiirka Soomaaliya u Fadhiya Fransiiska Siciid Xaaji Faarax.
War Deg Deg ah: Ciidamo Itoobiyaan ah iyo kuwa daacad u ah DFKM oo soo gaaray Degmada Doolow
Gedo:-Wararka naga soo gaaraya saaka magaalada B/xaawo ee xarunta gobalka Gedo ayaa sheegaya in ciidamo Itoobiyaan iyo Soomaali ah oo uu hogaaminayo Gen. Kuusow ay soo gaareen Degmada Doolow kuwaas oo wata gawaari Tikniko ah .
Ciidamadan ayaa waxaa ay yihiin sida ay sheegeen saraakiil u hadlay DFKM cidamo tawabar uu ugu soo dhamaaday gudaha dalka Itoobiya waxaana hor kacaya ciidamadaas Saraakiil ka soo jeeda gobalka Gedo.
Afhayeen u hadlay ciidankaas Barre Cabdi Barre ayaa saxaafada u sheegay in ay ciidamadooda ay haatan diyaargaroobeen ayna weerar ku yihiin gobalka Gedo oo ay ka taliyaan AL-Shabaab iyo Xisbul Islaam.
Dowlada Itoobiya oo fara galin badan ku haysa dalka Soomaaliya ayaa waxay rabtaa in ay dib u soo celiso hogaamiyo kooxeedyadii iyo fowdadii ka socotay Soomaaliya 1991 iyada oo cid ay taageero buuxda siinayso aan jirin ee marba qolo ay soo siinayso xoogaa hub ah oo ay ku dagaal gasho wax ka yar bil.
Maamulka Degmada Buuhoodle oo ku Baaqay in Sharuud la,aan Lagu Sii Daayo Gaadiid ay Ciidamo Itoobiyaan halkaa ka kaxaysteen
Maajo 30, 2010
Maamulka degmada Buuhoodle ayaa Cabasho xoogan ka Muujiyay Gaadiid nooca xamuulka Qaada ah oo ay Ciidamo itoobiyaan halkaa ka kaxaystaan Maalmo ka hor.
Waxaa la sheegay in Degmada Buuhoodle ay ka Socdaan Qaban Qaabada Mudaharaadyo arimahaasi looga soo horjeedo,Waxaana Baabuurtaasi iskala lahaa Ganacsato Soomaaliyeed.
Duqa degmada Buuhoodle ee gobolka Ceyn Xuseen Dacwi oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in Gaadiidkaasi ay iska lahaayeen Dadka deegaanka Buuhoodle.
Xuseen Dacwi Ducaale Duqa degmada Buuhoodle ayaa Cadeeyay in baabuurtaasi oo gaaraya 17 ay Gacanta ku hayaan Ciidamo itoobiyaan ah oo ku sugan Xaduudka kala qaybiya somaliya iyo Itoobiyaa.
Xiisada arinta ka dhalatay ayaa la sheegay in aad u sii kacday ,iyadoo wali uu jiro khilaaf ka dhashay Fariisin ay Ciidamada itoobiyaanka ah halkaa ka samaysteen.
Ugu danbaynti Maamulka degmada Buuhoodle ayaa ku baaqay in si shuruud la,aan ah lagu soo siidaayo gaadiidkaasi ,Waxaana jira Dadaalo ay wadaan Xubno ka mid ah Maamulka Puntland oo arintaa la xiriirta.
Xilkani wuxuu bannaanaaday ka dib markii, Shiikh Adan Maxamed Nuur, uu xilka iska casilay.
Shariif Xasan Shiikh Adan waa markii labaad ee derejadan loo doorto intii ay jirtay TFG.
Markii hore waxaa uu darajada waayay ka dib markii ciidammada ethiopia ay galeen dalka Soomaaliya isaguna diiday in uu dalka ku laabto.
Shariif Xasan, waa siyaasi hore uga qeyb qaatay khilaafyo fara badan oo siyaasadeed oo uu qaarna la galay Madaxweynihii hore Cabdullaahi Yusuf iyo Raiisal Wasaarihiisii Cali Maxamed Geeddi, qaarna uu la galay madaxda hadda jirta sida Shiikh Aden Maxamed Nuur.
Shariif Xasan waxay wax badan wadaagaan Madaxweynaha Shiikh Shariif Shiikh Axmed.
Ma aha in ay isku magac yihiin oo keliya ayna koofiyado isu ay eg qaataan.
wadaaddada ku xeeran Madaxweynaha oo sheegta in ay yihiin xertii Shiikh Maxamed Macallin ayaa waxay dagaal aan qarsoodi lahayn la galeen Shariif Xasan Shiikh Adan.
Kuwooda baarlamaanka xubnaha ka ah ayaan qarsan dagaalkaas.
Taas waxaa macnaheedu ahaan karaa in Madaxweynuhu aanuu ku raacsanayn in Shariif Xasan aanay Madaxweynaha meel u wada socon ama in ay wadaaddadan siyaasadda ku jiraa ay Shiikh Shariif taladiisa dhinac mareen.
Labada midda ay tahayba waa arrin miisaan siyaasadeed saari karta TFG.
Tallaabada doorashadan xigta waxay noqon doontaa waxa laga yeelayo mustaqbalka xukuumadda uu Madaxda u yahay Ra’iisal Wasaare Cumar Cabdirashiid.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in uu xilka ka qaaday Ra’iisal Wasaaraha, kadibna markii uu malahaa yaqiinsaday in aan tallaabadaasi wafaaqanayn dastuurka ayuu ka noqday.
Si kastaba ha ahaatee, Cumar Cabdirashiid intii qalalaasaha siyaasadeed socday waxay isku dhinac ka soo wada jeedeen Shariif Xasan, oo hadda awooddiisii loo sii kordhiyay.
Haddii ay dhacdo in la dhaqaajin waayo Cumar Cabdirashiid waxaa ugu yaraan dhici doonta in xilka laga xayuubiyo Wasiirro dhowr ah oo iyagu h kooxda dagaalkii ay ku jireen lagu jebiyay.
Dhabbahaugu sahlan ee loo soo mari doonaana waa hirgelinta heshiiskii lala galay Ahlu Sunna.
Si kastaba ha ahaatee, mar haddii Shariif Xasan oo lagu yaqaan dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo aan nasiino lahayn, isla markaana ah nin aad ugu xeel dheer siyaasadda Soomaaliya ka socotay sanooyinkan dambe, welibana xiriirka ugu dhow la leh dalka deriska ah ee Ethiopia, hadda loo doortay xilkan, waxaa hubaal ah in siyaasadda TFG ee fadhiidka ah aanay sideedii hore ahaan doonin.
Ciyaaryahankii Shiikhaalow oo Geeryooday
Ciyaartoygii kubada cagta ee kooxda qaranka Somalia iyo kooxdii Municipio ee magaalada Muqdisho, Maxamed Hussein Cali( Shiikhaalow) ayaa saaka ku geeryooday magaalada Muqdishu.
Wadnaha ayaa la sheegay in uu xanuunay oo isla markiiba geeryooday, waxaana lagu aasay xaafada Medina.
Shiikhaalow wuxuu caan ku ahaa xirfada kubada iyo isagoo goolasha si sahlan u dhalin jirey, oo ay difaaca iyo goolhayayaasha ka soo horjeeda ka biqi jireen.
Shiikhaalow wuxuu ahaa nin aan kubada ku xanaaqin, balse inta badan isaga lagu xanaaqi jirey.
Wuxuu lahaa dabeecad wanaagsan oo ay dhalinyaro badan tusaale ka dhigan jireen ku dayan jireen.
Intii uu ciyaaraha ka fadhiistay wuxuu ahaa tababare, isagoo dhalinayaro fara badan tababary, oo xataa tegay Gobolo sida Hiiraan oo uu tababaray dhalinyaro badan.
Nuur Maxamed Suufi(Nuur gaab) oo ay isku koox ahaayeen Shiikhaalow, ayaa waraysi ay BBC la yeelatay wuxuu sheegay in uu in uu ahaa nin Ilaahay haybad u siiyey ciyaarta kubada cagta, oo uusan iloobayn goolashii uu dhalin jirey.
Xarrakatul Shabaabul Mujaahidiin oo maanta sheegtay inay joojisay xiriirkii kala dhexeeyay Telefishinka Af Soomaaliga ku hadla ee Universal
Afhayeenka Xarrakatul Shabaabul Mujaahidiin Sheekh Cali Maxamuud Raage (Sheekh Cali Dheere) oo shir jaraa’id u qabtay Saxaafadda ayaa sheegay inay joojiyeen xiriirkii kala dhexeeyay Telefishinka Universal ee ku hadla Afka Soomaaiga.
Sheekh Cali Dheere ayaa shirkiisa jaraa’id ku sheegay in xafiiskooda warfaafinta uu go’aan ka qaatay Telefishinka Universal markii uu xalay warkaas sii daayay, isagoo sheegay inuu u bareeray Aflagaadeynta Nebi Muxamed (NNKH).
“Telefishinka Universal waxaa warkii xalay 11:00-habeenimo ka baxay lagu sii daayay kartoonno lagu aflagaadeynayo Nebi Muxamed (NNKH), waxaana taas ay qayb ka tahay dagaalka lagu hayo diinta Islaamka” ayuu yiri Sheekh Cali Dheere.
Afhayeenka Xarrakatul Shabaab wuxuu sheegay in go’aan ay ka qaateen Universal Tv uu socon doono illaa ay kala imaanayaan Towbo wanaagsan, isla markaasna ay ka qiranayaan dambiga weyn ee ay galeen.
“Culummada Islaamka waa isku raacsan tahay in haddii la caayo Nebi Muxamed (NNKH) looga baxayo diinta Islaamka” ayuu yiri Sheekh Cali Dheere oo sheegay inay ugu baaqayaan shacabka Islaamka ah inay aragti gaar ah ka qaataan Telefishinka ayna Mujaahidiintu ka digtoonaadaan wararka uu baahinayo.
Wuxuu sheegay in go’aano kale oo ay ka qaataan ay la sugi doonaan sida ay u dhaqmaan, iyadoo kartoonnada uu sii daayay Telefishinka Universal lagu daabacay wargeyso kasoo baxa dalka Koonfur Afrika.
Telefishinka Universal oo ay xaruntiisu tahay dalka Ingiriiska ayaa ku leh xarumo dhowr ah dalka Soomaaliya, kuwaasoo laga baahiyo wararka ka baxa, inkastoo maamulkooda aysan weli ka hadlin go’aanka kasoo baxay Xarrakatul Shabaab.
War Deg Deg ah: Madaafiic sababtay dhimasho iyo dhawaac oo saakay ku dhacday degmada Hodon
Maajo 29, 2010
Sabti, 29 May, 2010 – Madaafiic sababtay dhimasho iyo dhaawac dad rayid ah ayaa saakay waxaa ay ku dhaceen Xaafado ka mid ah degmada Hodon ee gobolka Banaadir iyadoona israsaaseyn kooban ay ka dhacda Fagaaraha Tarabuunka.
Madaafiicdaani oo ku dhacday nawaaxiga Xaafada Barmuudo iyo Taleex ee degmada Hodon ayaa sabtay dhimashada hal ruux iyo dhaawaca sedax kale kuwaasi oo dhamaantood ahaa dad rayid ah oo ilaalinayay qaar ka mid ah guryihii laga barakacay.
Madaafiicda ayaa timid xili Saakay Muqdisho aanay wax dagaal ah ka jirin waxaana dhaawacyadii ku waxyeeloobay madaafiicdaasi loo qaaday qaar ka mid ah Isbitaalada Magaalada Mqdisho halkaasi oo ay horay u buuxdhaafiyeen dhaawacyo kale oo Muqdisho ku waxyeeloobay.
Dhinaca kale is-rasaaseyn kooban ayaa waxaa lagu soo waramayaa in saakay ay ka dhacday nawaaxiga isgosyska Tarabuunka degmada Hodon ee gobolka Banaadir halkaasi oo bilihii ugu dambeeyay ay isku horfadhiyeen dhinacyada ku dagaalamaya Magaalada Muqdisho.
Shalay galinkii dambe ayay aheeyd Markii madaafiic sidaan oo kale dhimasho iyo dhaawac sababtay lagu garaacay xaafado ka mid ah degmada Hodon gaar ahaan agagaarka qeybta Qudaarta ee Suuqa Bakaaraha ee Magaalada Muqdisho.
War Deg Deg ah: Inadhacade iyo Cabdiramaxaan Cabdishakuur oo dil ka fakaday
Maajo 28, 2010
Wasiirka qorsheynta qaranka iyo iskaashiga Caalamiga dowladda Soomaaliya ayaa ka warbixiyay qarax xalay lala eegtay kolonyo ay la sodeen isaga iyo labo wasiir, xilli ay marayeen wadada Maka Al-Mukarama.
Qaraxa oo ahaa miino wadada dhinaceeda la dhigay ayaa waxaa lala beegsaday kolonyada ay la socdeen wasiirada qorsheynta C/raxmaan C/shakuur, wasiiru dowlaha gaashaandhiga Yuusuf Indhacade iyo wasiirka arrimaha bani’aadanimada Maxamed Cabdi Ibraahim Garweyne.
C/raxmaan C/shakuur ayaa sheegay in qaraxa la rabay in lagu qaarijiyo iyaga balse uu Alle ka badbaadiyay, isaga oo eeda qaraxa dusha ka saaray ciidamada booliska iyo kuwa nabad sugida dowlada.
“Waxaan aheyn sadex wasiir oo ka yimid madaxtooyada, kolonyadeena ayaa lala beegsaday qarax meel u dhaxeyso Hotel Wehliye iyo Dabka, waxna nama gaarin laakin waxaan maqlay in dad meel fadhiyey ay wax ku noqdeen” ayuu yiri C/raxmaan C/shakuur.
Qaraxa ayaa la sheegay in lala helay baabuur uu watay Maxamuud Cabdi Ibraahim Garweeyne Wasiirka Arrimaha Bani,aadannimada halkaas oo ay ku dhaawacmeen sadex ka mid ah ilaaladiisa la socotay baabuurka.
Sadex ruux oo rayid ah oo ay laba ka mid ah caruur ahaayeen ayaa ku geeriyooday qaraxi xalay halka ay ku dhaawacmeen lix kale kuwaas oo ku sugnaa hareeraha wadada laamiga ah.
Dowladda soomaaliya ayaa waxaa horay looga dilay ilaa iyo shan wasiir, 18 June sanadki 2009 waxaa magaalada B/weyn lagu dilay wasiirkii Amniga Qaranka Cumar Xaashi Adan, 3-dui December ee isla sanadkaasina waxaa qarax kale lagu dilay sadex wasiir iyo mid kale oo uu halkaasi dhaawac ka soo gaaray kadibna dhaawacaasi u dhintay.
War Deg Deg ah: Shariif Xasan Shiikh Aadan oo loo doortay Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya
Doorashadii Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa daqiiqado ka hor soo gebagebowday, waxaana ku guuleystay Xildhibaan Shariif Xasan Shiikh Aadan oo doorashadan ka hor ahaa Wasiirkii Maaliyadda iyo Ra’iisal Wasaare ku xigeen.
Xildhibaan Shariif Xasan Shiikh Aadan oo ay la tartamayeen 4 XIldhibaan oo kale ayaan wuxuu doorashada ku guuleystay isla wareeggii koowaad, waxayna tartamayaasha u kala heleen codadka sidan:
Shariif Xasan Shiikh Aadan 217
Cabdi Xaashi C/llaahi 143
Cabdi Kaafi Macaallin Xasan 012
Axmed C/llaahi Fanax 010
C/llaahi Shiikh Ismaaciil 004
Xildhibaannada doorashadan soo xaadiray oo gaarayay 388 mudane ayaa wuxuu Shariif Xasan u baahnaa in uu helo 258 mudane, waxaase u sahlay Xildhibaan Cabdi Xaashi C/llaahi oo ku soo xigay doorashadii wareegga labaad ka tanaasulay.
Markii lagu dhawaaqay in Shariif Xasan uu ku guuleystay doorashadii guddoomiyenimada Baarlamaanka, isla markiiba waa la dhaariyay, wuxuuna Guddoomiyihii KMG ahaa Xaaji Shukri uu kala wareegay xilkii uu sida KMG ahayd u soo hayay.
Shariif Xasan dhaarintiisa kaddib hadlayna wuxuu sheegay in uu u mahadcelinayo Xildhibaannadii codadkooda siiyay iyo weliba kuwii aanan siinin, wuxuuna ka codsaday mudanayaasha in ay la shaqeeyaan, isagoo kaddibna u sheegay in ay maalinta Axadda ah ee soo socota ay isugu yimaadaan shir uu Baarlamaanka yeelan doono.
Waxaa xusid mudan in dib loo dhigay doorashadii Guddoomiye ku xigeennada Baarlamaanka, waxayna arrintaas ka dhalatay markii ay sidaas isla garteen Guddigii doorashada Madaxweynaha Soomaaliya iyo Maxkamadda Sare.
Goobta Doorashada ka dhaceysay oo ahayd xarunta Golaha Shacabka oo dhawaan dib loo dayactiray ayaa waxaa ammaankeeda si weyn u adkeynayay Ciidamada Amisom iyo Ciidamada Dowladda Soomaaliya, mana jirin wax buuq iyo fowdo ah oo dhacay intii doorasahda socotay iyo weliba dagaallo iyo duqeyn magaalada ka dhacday. Waxay ahayd markii ugu horreysay oo muddo 20 sano ah ay Xildhibaano metelaya Baarlamaanka Soomaaliya ay doorasho ku qabtaan Xarunta Golaha Shacabka Soomaaliya.
Si kastaba arrintu ha ahaatee, Guddoomiyaha cusub ee Baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan Shiikh Aadan ayaa horay xilkan u hayay intii aan xilka laga qaadin isaga iyo Xildhibaanno kale oo markii xilalka laga qaaday kaddib u baqoolay Magaalada Asmara ee Dalka Eritrea, halkaasi oo ay ku aas-aaseen Isbaheysigii Dib u xoreynta Soomaaliya oo halgankii uu ka soo galay uu wax bedelay Dowladda TFG-da oo uu ka noqday Wasiirkii Maaliyadda iyo Ra’iisal Wasaare ku xigeen illaa ugu dambeyntii maanta dib loo doortay xilkii Guddoomiyenimada Baarlamaanka Soomaaliya.
War Deg deg ah: X.M. Al Shabaab oo sheegay in ay la wareegeen deegaano ka tirsan Galgaduud
Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab ayaa sheegay in ay Saakay la wareegeen gacan ku heynta deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka Galgaduud iyadoona si nabad galyo ah halkaasi ay Ciidamadooda ku qabsadeen.
Saraakiil katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab oo saakay la soo xiriiray Shabelle ayaa waxa ay sheegeen in si nabad galyo ah ay kula wareegeen tuulooyin ay kamid yihiin Ceeldheere oo u dhaxaysa degmooyinka Dhuusamareeb iyo Guriceel, Galqoryaale oo hoostagta magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud iyo Mareerguur oo iyana u dhaxyasa deegaanka Godonlabe iyo waliba Guriceel.
Dhinaca kale mar aynu isku daynay in aan xiriiro la sameenayo Culumaa’udiinka Ahlu Sunna Waljmaaca ee goobahaasi haystay ayay inoo suuro galiwaysay in aan qadka taleefoonka isku haleelno.
Horay ayaa degmooyinka iyo deegaano katirsan gobolka Galgaduud waxa ay dagaalo ku dhaxmareen Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab iyo kuwa Culumaa’udiinka Ahlu Sunna Waljmaaca iyadoo dhowr jeer oo horayna ay Xarakada Al Shabaab la wareegeen gacan ku haynta deegaano katirsan gobolka Galgaduud.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Maajo, 2010.